в Ozimele, Umkhuba / Amathrendi
Namuhla eRussia umuntu angakhuluma ngomqondo ovulekile hhayi kuphela ngokusweleka kochwepheshe emkhakheni wezokukhiqiza kwezolimo, kodwa nangokushoda kwabasebenzi emaphandleni wonkana. Ngasikhathi sinye, ukuthuthukiswa okusheshayo kwemishini yezolimo nobuchwepheshe kudinga ngisho nakubantu abangenawo amakhono isethi ethile yolwazi namakhono.
Alexander Zharov, Inhloko yoMnyango Wokuthuthukiswa Kwephrojekthi emazweni e-CIS e-DEULA-Nienburg GmbH
Imfundo yezolimo eRussia imvamisa iyinkolelo-mbono; abaningi abaphothule iziqu kufanele bafundiswe umsebenzi owenziwayo zisuka nje. Futhi ukuntuleka koqeqesho kunoma yiliphi izinga kuholela ezindlekweni zesikhathi esiphakeme nezindleko zezezimali.
Kodwa-ke, uma sihlola isimo ngokungenaphutha, le nkinga ingeyomhlaba wonke. Ukuphuma kuyo kunikezwa yi-DEULA-Nienburg Practical Training Center (iDeutsche Lehranstalt fur Agrartechnik). Yasungulwa emuva e1926. Namuhla i-DEULA-Nienburg iyisikhungo semfundo esikhulu kunazo zonke eJalimane. Isikhungo sinamamitha angaphezu kuka-92 izindawo zokuqeqesha nezokukhiqiza, zinamabhizinisi angaphezu kuka-250 abalingani.
Izinsizakalo zesikhungo zisetshenziswa yizo zombili izingcweti kanye namaqembu ahlelekile aqondiswe ekufundiseni nasekufundiseni kabusha. Namuhla, abakhiqizi bezolimo babheka ukuqeqeshwa okuthuthukile njengotshalomali olusebenzayo ekuthuthukiseni ibhizinisi labo futhi bahlanganyele ngenkuthalo izingqungquthela nezifundo ezahlukahlukene.
Lesi sikhungo siqeqesha ongoti kulezi zindawo ezilandelayo: ukukhiqizwa kwezitshalo, ukufuywa kwezilwane, imishini yezolimo, ukukhiqizwa kwezinto eziphilayo, ukukhulisa imifino, ukuphathwa kwezinto, ukuphathwa.
Yonke imikhakha yezobuchwepheshe emkhakheni wezolimo iwela emkhakheni wombono weSikhungo. Umsebenzi ukuqeqesha abantu ezintweni ezifunwa kakhulu ngesikhathi esifushane futhi, okokuqala, ukubanikeza wonke amakhono asebenzayo adingekayo.
Uhlelo olujwayelekile luhlose ukufundisa ochwepheshe ekusebenziseni kahle ubuchwepheshe bezolimo kanye nokongiwa kwemithombo. Uma kunesidingo, izinhlelo zezifundo ngazinye zenzelwe umfundi ngamunye (noma amaqembu abafundi). Ukuze kuqeqeshwe ongoti kwezobuchwepheshe besimanje, iSikhungo siphetha izivumelwano nezinkampani ezikhiqizayo zokudlulisa imishini yezolimo kanye nemishini ezosetshenziswa okwesikhashana.
Amandla eSikhungo enza futhi ukuthi kube lula ukuqhuba izifundo zokuthuthuka zochwepheshe abaqeqeshiwe abavela ezinkampanini ezihola phambili zomhlaba wonke. Yibo laba basebenzi abazoqonda kahle ubuchwepheshe besimanje futhi bangenise izinto ezintsha emikhiqizweni emikhulu.
I-DEULA-Nienburg imema abakhiqizi bezolimo baseRussia ukuthi bayoqeqeshwa eJalimane, kepha, ngokubheka isimo somhlaba kanye nezifiso zamakhasimende, bakulungele ukuhlela izifundo kunoma yikuphi ukuqondiswa kwezolimo eRussia, ngesisekelo samabhizinisi abalingani.
Sizojabula ukukubona emicimbini yezemfundo ye-DEULA-Nienburg!
Tags: 2020 No. 3ozimeleIzifundo zokuqeqeshaukuqeqeshwa
Indawo yokudlela yaseMoscow iTwin Garden inikeza amawayini wemifino ekhethekile